အဆိုးမြင်ဝါဒီ လူ့ဂွစာတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေစကားပြောနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခု – Gentleman Magazine
အဆိုးမွငျဝါဒီ လူ့ဂှစာတှနေဲ့ အဆငျပွပွေစေကားပွောနိုငျဖို့ နညျးလမျး(၇)ခု
သူတို့ကို သင်တွေ့ဖူးမှာပါ။ အလုပ်အတူတူလုပ်ဖူး၊ တစ်အိမ်တည်းအတူနေဖူးတာမျိုးလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ။ သူတို့က ညည်းညူမယ်၊ ဝေဖန်မယ်၊ အပြစ်တင်မယ်။ သူတို့တွေက ကမ္ဘာကြီးကို အမြဲတမ်းအပြစ်မြင်နေတတ်သူတွေပါ။ ဒီလို အဆိုးမြင်စိတ်များတဲ့ လူ့ဂွစာတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ပင်ပန်းပါသလား? ပင်ပန်းရင်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာက နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆိုးမြင်ဝါဒီ လူ့ဂွစာတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ လမ်းကြောင်းမလွဲပဲ အဆင်ပြေပြေစကားပြောနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၇)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက် အဆိုးတွေပဲစပြောလာပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့နာကျဉ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို ဆက်ပြောပါ။ ကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာ ဆိုတာမျိုးနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုနဲ့ စကားကို လမ်းကြောင်းမှန် ရောက်အောင် ဆွဲဆောင်ပါ။
သူတို့ရဲ့ အဆိုးမြင်စိတ်ကို အားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူတို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကို ချီးကျူးပေးသင့်ပါတယ်။ မင်း ဒီလိုအခြေအနေကိုတောင် ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တာပဲ ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောပေးပါ။ ဒီလိုပြောပေးခြင်းအားဖြင့် စကားဝိုင်းက အပြုသဘောပြန်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ်ချင်းစာကြောင်း ပြပါ။
သူတို့အတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုး သင်လည်း ကြုံဖူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်အကြောင်းကို ပြောပြပါ။ အဆိုးထဲကအကောင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကားပျက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဒီမနက် မင်းကားပျက်သွားတာ တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာပဲ။ ငါလည်း သိပ်မကြာခင်က ဖြစ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းတော်တဲ့ စက်ပြင်ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ငါ ဆုံဖြစ်သွားတယ်လေ။ မင်း သူ့ဖုန်းနံပါတ်လိုချင်လား ဆိုတာမျိုးလေး ပြောပေးပါ။
သင်ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး အဆိုးမြင်တစ်ခုခုပြန်ပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တစ်ယောက်ယောက် အလုပ်အဆင်မပြေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြည်တွန်တောက်တီးနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် မင်းက အခုလိုတာဝန်ယူလုပ်ပေးဖို့ကို အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောချင်တာလားလို့ မေးကြည့်လိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့မှ ပြောစရာရှိတာကို ဆက်ပြောပါ။
၅။ ကူညီဖို့ ကမ်းလှမ်းပါ။
တစ်ဖက်လူကပြောလာတဲ့အကြောင်းအရာက အကူအညီလိုအပ်နေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတွေက အကူအညီတောင်းဖို့ကို ခက်နေတာကြောင့် သူတို့အဆင်မပြေတာတွေကိုပဲ ညည်းညူနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကူညီပေးနိုင်တာကို ကူညီပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တာက သူတို့အတွက် အဆင်ပြေသွားစေနိုင်ပါတယ်။
၆။ အကြောင်းအရာကို ပြောင်းပါ။
သူတို့ပြောလာတာကို နားထောင်ပေးပြီးတာနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြောင်းအရာဖက်ကို စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲပါ။ သူငယ်ချင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း လာညည်းပြနေသူတစ်ယောက်ကို မင်းသူငယ်ချင်းနဲ့ အဆင်မပြေတာ ငါလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မင်း ညှိနှိုင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ငါထင်တယ်။ ဒါနဲ့ ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက်ကျရင် မင်းဘာအစီအစဉ်ရှိလဲ ဆိုတာမျိုး ပြောပြီး စကားလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလိုက်ပါ။
၇။ ဆက်မပြောဖို့ ငြင်းဆိုပါ။
တစ်ယောက်ယောက် အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောလာတာကို နားမထောင်ချင်ဘူးဆိုရင် ဆက်မပြောဖို့ကို ငြင်းဆိုတတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသတွေ၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်တာတွေ မပါဝင်ပဲနဲ့ ပုံမှန်အသံနဲ့ပဲ စိတ်မ၀င်စားကြောင်း ပြောဆိုပါ။
တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ ပြောတာကိုနားထောင်ပြီး အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးမသွားပါစေနဲ့။ သင့်စိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုကို ထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆိုးမြင်တတ်သူတွေကို အားမပေးပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဆက်ဆံတတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
သူတို့ကို သငျတှဖေူ့းမှာပါ။ အလုပျအတူတူလုပျဖူး၊ တဈအိမျတညျးအတူနဖေူးတာမြိုးလညျး ရှိခငျြရှိမှာပါ။ သူတို့က ညညျးညူမယျ၊ ဝဖေနျမယျ၊ အပွဈတငျမယျ။ သူတို့တှကေ ကမ်ဘာကွီးကို အမွဲတမျးအပွဈမွငျနတေတျသူတှပေါ။ ဒီလို အဆိုးမွငျစိတျမြားတဲ့ လူ့ဂှစာတှနေဲ့ ဆကျဆံရတာ ပငျပနျးပါသလား? ပငျပနျးရငျလညျး ဘာမှမတတျနိုငျပါဘူး။ ဒီလိုလူတှနေဲ့ ဆကျဆံရတာက နစေ့ဉျဘဝမှာ ရှောငျလှဲလို့မရနိုငျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆိုးမွငျဝါဒီ လူ့ဂှစာတှနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါမှာ လမျးကွောငျးမလှဲပဲ အဆငျပွပွေစေကားပွောနိုငျဖို့ နညျးလမျး (၇)ခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
တဈယောကျယောကျ အဆိုးတှပေဲစပွောလာပွီဆိုရငျ သူတို့ရဲ့နာကဉျြမှုကို အသိအမှတျပွုပေးလိုကျပါ။ ပွီးတာနဲ့ ပွောခငျြတဲ့အကွောငျးအရာကို ဆကျပွောပါ။ ကွားရတာစိတျမကောငျးလိုကျတာ ဆိုတာမြိုးနဲ့ နှဈသိမျ့ပေးလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အပွုသဘောဆောငျတဲ့အကွံဉာဏျလေးတဈခုနဲ့ စကားကို လမျးကွောငျးမှနျ ရောကျအောငျ ဆှဲဆောငျပါ။
သူတို့ရဲ့ အဆိုးမွငျစိတျကို အားပေးတာမြိုးမဟုတျပဲ သူတို့ကိုငျတှယျဖွရှေငျးပုံကို ခြီးကြူးပေးသငျ့ပါတယျ။ မငျး ဒီလိုအခွအေနကေိုတောငျ ဖွရှေငျးလိုကျနိုငျတာပဲ ဆိုတဲ့စကားမြိုးပွောပေးပါ။ ဒီလိုပွောပေးခွငျးအားဖွငျ့ စကားဝိုငျးက အပွုသဘောပွနျဆောငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၃။ ကိုယျခငျြးစာကွောငျး ပွပါ။
သူတို့အတှကျ စိတျပကျြစရာဖွဈနတေဲ့ အကွောငျးအရာမြိုး သငျလညျး ကွုံဖူးနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ သငျ့အကွောငျးကို ပွောပွပါ။ အဆိုးထဲကအကောငျးတှေ ဖွဈလာနိုငျကွောငျး အလေးပေးပွောပါ။ ဥပမာပွောရရငျ ကားပကျြလို့ စိတျညဈနတေဲ့ လူတဈယောကျကို ဒီမနကျ မငျးကားပကျြသှားတာ တကယျကိုစိတျပကျြစရာပဲ။ ငါလညျး သိပျမကွာခငျက ဖွဈဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရမျးတျောတဲ့ စကျပွငျဆရာတဈယောကျနဲ့ ငါ ဆုံဖွဈသှားတယျလေ။ မငျး သူ့ဖုနျးနံပါတျလိုခငျြလား ဆိုတာမြိုးလေး ပွောပေးပါ။
သငျကွားရတဲ့အကွောငျးအရာကို အခွခေံပွီး အဆိုးမွငျတဈခုခုပွနျပွောတာမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ တဈယောကျယောကျ အလုပျအဆငျမပွမှေုနဲ့ ပတျသကျပွီး မွညျတှနျတောကျတီးနတေယျဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရငျ မငျးက အခုလိုတာဝနျယူလုပျပေးဖို့ကို အဆငျမပွဘေူးလို့ ပွောခငျြတာလားလို့ မေးကွညျ့လိုကျပါ။ မဟုတျပါဘူးလို့ပဲ ဖွပေါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့မှ ပွောစရာရှိတာကို ဆကျပွောပါ။
၅။ ကူညီဖို့ ကမျးလှမျးပါ။
တဈဖကျလူကပွောလာတဲ့အကွောငျးအရာက အကူအညီလိုအပျနတောမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော လူတှကေ အကူအညီတောငျးဖို့ကို ခကျနတောကွောငျ့ သူတို့အဆငျမပွတောတှကေိုပဲ ညညျးညူနတေတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကူညီပေးနိုငျတာကို ကူညီပေးဖို့ ကမျးလှမျးလိုကျတာက သူတို့အတှကျ အဆငျပွသှေားစနေိုငျပါတယျ။
၆။ အကွောငျးအရာကို ပွောငျးပါ။
သူတို့ပွောလာတာကို နားထောငျပေးပွီးတာနဲ့ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အကွောငျးအရာဖကျကို စကားလမျးကွောငျး ပွောငျးလဲပါ။ သူငယျခငျြးနဲ့အဆငျမပွဖွေဈနတေဲ့အကွောငျး လာညညျးပွနသေူတဈယောကျကို မငျးသူငယျခငျြးနဲ့ အဆငျမပွတော ငါလညျး စိတျမကောငျးပါဘူး။ မငျး ညှိနှိုငျးနိုငျလိမျ့မယျလို့ ငါထငျတယျ။ ဒါနဲ့ ဒီတဈပတျရုံးပိတျရကျကရြငျ မငျးဘာအစီအစဉျရှိလဲ ဆိုတာမြိုး ပွောပွီး စကားလမျးကွောငျးကို ပွောငျးလိုကျပါ။
၇။ ဆကျမပွောဖို့ ငွငျးဆိုပါ။
တဈယောကျယောကျ အဆငျမပွတေဲ့အကွောငျးတှေ ပွောလာတာကို နားမထောငျခငျြဘူးဆိုရငျ ဆကျမပွောဖို့ကို ငွငျးဆိုတတျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒေါသတှေ၊ စိတျပကျြလကျပကျြဖွဈတာတှေ မပါဝငျပဲနဲ့ ပုံမှနျအသံနဲ့ပဲ စိတျမဝငျစားကွောငျး ပွောဆိုပါ။
တဈယောကျယောကျက သူ့ဘဝမှာ ကွုံတှရေ့တဲ့ အဆငျမပွမှေုတှေ ပွောတာကိုနားထောငျပွီး အဖိုးတနျတဲ့အခြိနျတှကေို ကုနျဆုံးမသှားပါစနေဲ့။ သငျ့စိတျရဲ့ ငွိမျးခမျြးမှုနဲ့ အလုပျပွီးမွောကျမှုကို ထိခိုကျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆိုးမွငျတတျသူတှကေို အားမပေးပါနဲ့။ ဒါပမေယျ့ သူတို့နဲ့ အဆငျပွပွေေ ဆကျဆံတတျဖို့တော့ လိုပါတယျ။
Previous: ဖောက်ထွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက် ရှေးရိုးစွဲနည်းလမ်း
Next: သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေဖို့